Uyazi njani idilesi ye-IP yefowuni yakho ye-Android | I-Androidsis
Uyifumana njani idilesi ye-IP kwifowuni yakho ye-Android
Kwimeko yekhompyuter, Ukwazi idilesi ye-IP yinto elula ngokwenene. Kodwa inkqubo yokukwazi ukuyazi kwifowuni yakho ye-Android yahlukile. Nangona kuyinyani ukuba kunokuba lula ukuyazi. Kwakhona, njengoko usenokwazi, sidibana neentlobo ezimbini zeedilesi ze-IP namhlanje. Siza kuthetha ngako konke oku kungezantsi.
Kuba sikubonisa indlela apho ungafikelela kwidilesi ye-IP ye-smartphone yakho ye-Android. Kwelinye icala, sithetha ngezi ntlobo zedilesi ye-IP esiyifumanayo kunye nolwahluko wazo. Ukuze wazi yonke into oyifunayo malunga noku.
1 Umahluko phakathi kwe-IP yoluntu kunye ne-IP yabucala
2 Uyazi njani i-IP yoluntu
3 Uyazi njani i-IP yabucala kwi-Android
3.1 Ngaba idilesi ye-IP yangasese inokufihlwa?
Umahluko phakathi kwe-IP yoluntu kunye ne-IP yabucala
Xa uqhagamshela kwi-Intanethi usebenzisa i-smartphone yethu ye-Android, unokuba needilesi ezimbini ezahlukeneyo ze-IP. Enye yazo yi-IP yoluntu, yona leyo iboniswa xa sikhangela i-Intanethi. Kwakhona kwaziwa kwiimeko ezininzi njenge-Intanethi ye-Intanethi, ekusenokwenzeka ukuba uyivile ngamanye amaxesha. Ke yi-IP eboniswayo, ngokungathi ijongene noluntu, ngokutsho oko. Kuququzelelwa yi-SIM yedatha okanye i-router esixhume kuyo.
Nangona xa sikhona ixhunyiwe kwi-Android kwinethiwekhi engenazingcingo, sikwanedilesi ye-IP yabucala. Kule meko, yidilesi enikezelwe kwifowuni yethu ngokukodwa kuthungelwano lweWiFi. Kwakhona, le dilesi ye-IP ayibonakali xa ukhangela.
Uyazi njani i-IP yoluntu
Xa isiza nokwazi i-IP yoluntu kwi-Android inzima kakhulu, kuba ayibhaliswanga nakuphi na ukuseta kwifowuni uqobo. Kwimeko apho ufuna ukwenza ulawulo olupheleleyo malunga noku, unako khuphela usetyenziso lwesixhobo, esibizwa ngokuba yidilesi yam ye-IP. Yisicelo esinoxanduva lokubonisa idilesi ye-IP yesixhobo, esidlangalaleni nakwabucala, ngawo onke amaxesha. Ke ngale ndlela kunokuba ngumdla.
Idilesi yam ye-ip
Umthuthukisi: Iphepha leWebhu
Kwelinye icala, kukho ezinye Amaphepha ewebhu akwabonisa idilesi ye-IP yoluntu kwisixhobo, njengefowuni yakho ye-Android. Ukwenza oku, kuya kufuneka ungene kwiwebhusayithi usebenzisa isikhangeli sefowuni. Mhlawumbi enye yezona zaziwa kakhulu eSpain yiMiip, iyafumaneka kule khonkco. Into eyenziwa yiwebhu kukubonisa nje olu lwazi kwiscreen nge-IP yoluntu. Le yeyona njongo iyizalisekisayo.
Uyazi njani i-IP yabucala kwi-Android
Ukuba into esifuna ukuyazi yi-IP yabucala yefowuni yethu ye-Android, ngekhe sisebenzise izicelo. Kuba yidatha eboniswe kuseto lwesixhobo ngokwaso. Ke kulula kakhulu ukufikelela kuyo ngalo lonke ixesha. Ngawaphi amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufikelela kule dilesi ye-IP yabucala?
Kuya kufuneka kuqala singene kuseto lwefowuni yethu ye-Android. Okulandelayo, kufuneka yiya kwicandelo leNkqubo. Ngaphakathi kuyo, ngokuqinisekileyo ekugqibeleni, kukho icandelo elibizwa ngokuba lwazi ngefowuni, ekufuneka singene kulo. Okulandelayo, kuya kufuneka ungene kwicandelo likaRhulumente.
Eli candelo libonisa inkitha yedatha malunga nenqanaba le-smartphone yethu ye-Android. Phakathi kwabo sifumana i-IMEI, idilesi ye-MAC yenethiwekhi ye-WiFi, inqanaba lebhetri kunye nedilesi ye-IP yabucala, eyidatha enomdla kuthi kule meko. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge kuphela icandelo labucala le-IP. Apho uya kuba nakho ukubona le datha.
Kunokubakho iifowuni ze-Android apho ifayile ye- Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngaphakathi kuseto aya kwahluka. Sele uyazi ukuba ngokuxhomekeke kuhlobo okanye uhlobo lwenkqubo yokusebenza, indawo yamacandelo athile ayisoloko ifana. Kodwa ihlala kwicandelo lolwazi lomnxeba apho siza kufumana idilesi ye-IP yabucala yefowuni. Le yinto engatshintshi phakathi kwemodeli enye kunye nenye.
Ngaba idilesi ye-IP yangasese inokufihlwa?
Kule meko, kunokwenzeka ukuba ufihle idilesi ye-IP yabucala kwi-Android. Nangona kuya kufuneka sisebenzise izixhobo zomntu wesithathu, Indlela yokusebenzisa iVPN. Ngethamsanqa, ukhetho lweVPNs lukhona banzi kakhulu, ukuze ukwazi Ukujonga i-Intanethi ngendlela ekhuselekileyo nenabucala. Ke awunakukhathazeka ngale dilesi ye-IP xa usebenzisa enye yazo.
Ezinye iindlela zokuyifihla usebenzisa ummeleli okanye usebenzisa inethiwekhi ye-TOR ukukhangela. Zonke ziya kusivumela ukuba sifihle idilesi ye-IP yabucala kwi-Android. Kodwa ukusetyenziswa kweVPN kunokuba kokona kulungileyo, kuba kwiimeko ezininzi kufuneka ukhuphele usetyenziso kwifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyifumana njani idilesi ye-IP kwifowuni yakho ye-Android
I-Facebook Messenger isungula ujongano lwayo olutsha kwi-Android
Indlela yokukhusela iphasiwedi kunye neefayile kwi-Android